Omenala Asia: Omenala na Omenala Asia | Akụkọ Njem
Maria José Roldan | | China, Tailandia, Asia njem
Mgbe ị na-eche banyere Eshia, Japan na China nwere ike iburu n'uche dị ka mba ndị bụ isi, mana nke bụ eziokwu bụ na Eshia nwere ọtụtụ mba ma ọ dị mkpa ịmata ha niile iji ghọta Omenala Asia na otu ha nwere ike di iche site n’otu ebe rue ebe ozo.
Ejiri mba 48 mejuputa kọntinenti Eshia: 41 onye Asia na Eurasia 7. Na encyclopedia ọ bụla ị nwere ike ịchọta aha mba niile dị ugbu a ma ị nwere ike ịhụ mba ole mejupụtara kọntinent a, mana agaghị m agwa gị maka omenala na ọdịnala nke mba ọ bụla, mana m bụ aga m agwa gị naanị banyere ụfọdụ n'ime ha, ndị m weere na ọdịnala pụrụ iche ma ọ bụ opekata mpe, na-adọta uche m yana achọrọ m ịkọrọ gị.
1 Omenala Asia: ọdịnala na omenala
3 Ememe oriọna
4 Agha mmiri na Thailand
5 Akpụkpọ ụkwụ dị ka ngosipụta nke nkwanye ùgwù
6 Nọmba anwansi nke China
7 Ekele na China
8 Kpachara anya nke ink na-acha uhie uhie na China
9 Ejila aka ekpe na Indonesia
10 Enweghị ndụmọdụ na Japan
Omenala Asia: ọdịnala na omenala
N’ụwa nile enwere ọtụtụ ọdịnala na ọdịnala, n’ihi na emesịa, ha bụ ihe na - eme anyị inwe mmetụta nke ịbụ onye obodo. Nke bụ eziokwu bụ na ọdịnala ndị Eshia nwere ike iju anyị bụ ndị ọdịda anyanwụ anya, n'ihi na n'ihe ụfọdụ ha na-eme ka anyị chee na anyị nọ ha nso, mana na ndị ọzọ ha nwedịrị ike ịkụziri anyị ụkpụrụ ndị anyị na-amaghị ma ọ bụ na anyị achọghị ịhụ. Eshia bu kọntinenti nke puru ime ka anyi huta ihe gbara ghasi na obodo o bula. Ma na-egbughị oge ọzọ, aga m agwa gị gbasara ụfọdụ omenala na ọdịnala ndị ama ama nke ọdịbendị Eshia nke nwere ike ịmasị gị.
Kanamara Matsuri pụtara ihe dị ka "Ememe nke metal phallus". A na-akpọ ya n'ihi na akụkọ mgbe ochie nwere ya na mmụọ ọjọọ nwere ezé ezé na-ezo n'ime ikpu nke nwa agbọghọ ma n'oge abalị agbamakwụkwọ nke nwanyị ahụ mmụọ ọjọọ ahụ tụbara ụmụ nwoke abụọ ka onye ọkpụzi jiri ọla phallus mebie ezé nke ekwensu. Site na aha ị nwere ike iche na ememme a nwere ọmụmụ ọmụmụ ma mee ya n'oge opupu ihe ubi ọ bụla na Kawasaki (Japan). Ọ bụ ezie na ụbọchị dị iche iche, ọ na-abụkarị Sọnde mbụ nke Eprel. Isi okwu ya bụ inye nsọpụrụ amụ, ihe nnọchianya nke dị na mmemme a, a na-anakọta ego maka nyocha megide ọrịa AIDS.
Ememe a na-ejegharị na-egosi njedebe nke ememme Afọ Ọhụrụ ndị China ha na-ewere ọnọdụ na ọnwa mbụ zuru ezu nke afọ. Ọ bụ abalị pụrụ iche, kpokọtara ma jupụta na ọkụ ndị China na-emezu. N’abalị e nwere puku ọkụ na oriọna ndị na-erubata ụlọ na ụlọ.
Ememme a na-eji ọ joyụ wee bie ọaradụ andụ na enwere parads, egwu, ịgba, ịgba egwu, acrobats ... na ọkụ ọkụ. Carrymụaka na-ebu ọkụ ọkụ ma ezinụlọ na-ezukọ iri osikapa ma kpọọ akụ na ụba na ịdị n'otu ezinụlọ.
Agha mmiri na Thailand
Omenala ọdịnala Eshia bụ akpọrọ Ememme Songkran na ọ bụ ezumike kachasị mkpa na Thailand. Songkran bu Buddhist ohuru, ndi mmadu n’emeghari ka ndi Buda gosi ha ugwu. Ka oge na-aga, ọdịnala a agbanweela ma bụrụ ọgụ mmiri n'etiti ndị mmadụ, dịka n'ọtụtụ ụdị ụdị a, a na-enwekarị mmanya na-aba n'anya. A na-eme ya n'okporo ụzọ Khao San na Bangkok.
Akpụkpọ ụkwụ dị ka ngosipụta nke nkwanye ùgwù
Ọzọ nke omenala ndị Eshia mejupụtara kpọpụ akpụkpọ ụkwụ n'ụlọ ọ bụ ihe gbasara na Asia niile. Emere nke a dị ka ihe ịrịba ama nke nkwanye ùgwù ma ọ bụ n'ihi na ala ga-adị ọcha. Yabụ ọ bụrụ na ị ga - aga ileta onye si Eshia wee laa n'ụlọ ha, ọ ga - adị ha mkpa ka ị hapụ akpụkpọ ụkwụ gị n'èzí ụlọ ha dị ka ngosipụta nke nkwanye ugwu.
Nọmba anwansi nke China
You ma na ndị China kwenyere na nọmba anwansi? Ee, ọ bụ ihe gbasara nọmba 8, nke dịka nkwenkwe ndị China si dị bụ akara jisie ike nke metụtara ego na ịba ọgaranya. Dika odi na nwunye ndi choro oganiru na alurita na 8th nke onwa obuna, oburu na odi n’onwa asato 8th Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ị ga - enwe mmasị ịmara na ịgụ kpakpando ndị China nwere akara zodiac iri asatọ. Ha nwekwara isi okwu 8, wdg. Obere ihe mberede ma ọ bụ 8 bụ nọmba pụrụ iche?
Ekele na China
Ga-ama ihe ahụ na China anaghị anabata ya dịka na West, zere isutu ọnụ n’ihi na ị nwere ike imejọ mmadụ. Ọ kasị mma ikwe n’aka iji kelee mmadụ n’ụzọ nkwanye ùgwù. Formdị ekele a nwere ike jikọta ọtụtụ ekele anyị ji ekele nye ndị anyị hụrụ n'anya na ndị anyị zutere ugbu a.
Kpachara anya nke ink na-acha uhie uhie na China
Ọ bụrụ na ị nọ na nzukọ azụmahịa na ịchọrọ ịdekọ ihe ụfọdụ ma ọ bụ zipu ihe edetu, emela ya na ink na-acha ọbara ọbara n'ihi na a na-eji ndo nke agba ahụ eme ihe maka atụmatụ na mkpesa na-adịghị mma. Yabụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ inwe mkpịsị akwụkwọ nwere ink ojii ma ọ bụ acha anụnụ anụnụ n'akpa gị, n'ụzọ ahụ ị ji n'aka na ị gaghị emejọ onye ọ bụla nwere agba nke ink.
Ejila aka ekpe na Indonesia
N'ihe banyere Indonesia Dịka ọmụmaatụ, ị gaghị eji aka ekpe gị nye onye ọzọ ihe ọ bụla n'ihi na omume a bụ ihe nnọchianya nke enweghị nkwanye ùgwù, agbanyeghị jiri aka nri gị. Otu ihe ahụ bụ maka ekele ma ọ bụ ịkpọtụrụ onye ọ bụla ọzọ, aka ekpe aka mma ka ị ghara iji ya, ọ ga-achọsi ike ịnweta ikike n'efu.
Enweghị ndụmọdụ na Japan
Ọ bụrụ na ịchọta onwe gị na Japan, n’ala ọwụwa anyanwụ egbula oge n'ụlọ nri. Ọ bụ omume dị na uto na-adịghị mma na ị nwere ike imejọ onye na-emeso gị.
Kedu maka Omenala Asia? Agwara m gị gbasara ụfọdụ n’ime ha site na mba ha ụfọdụ, ị chọrọ ịgwa anyị ihe ọ bụla ọzọ ị maara?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Asia njem » China » Omenala Asia
Agha Arsenius dijo
Ọ bụ obere ozi, ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla, nke ahụ dị mma. ihe bụ ihe na kwa ụbọchị ị ga-amụta ntakịrị karịa
Zaghachi Arsenio Guerra
Aberdeen, a pealu ke Scotland